Kani ku gal (Sheeko) – Kaasho Maanka
Kani ku gal (Sheeko)
Qaybta: Sheeko Maadeed
Dhaqankii hore ee soomaalida wadaaddadu sida badan khayr bay ahaayeen oo ma ay jirin wadaaddada xunxun ee maanta dadka caaya, dila, addimada ka jara oo gaaleeyaa.
Wadaaddadu saddex nooc bay ahaayeen. Kow macallin quraan oo dhibta ugu badan ee uu geystaa ay ahayd in uu carruurta jirdilo midkoodii quraanka si fiican u baran waaya ama dowdarnimo kale sameeya, waxa uuna macallinku heli jirey xoolo lagu siiyo xirfaddiisa. Labo shiikh xer leh oo laga raacdo kutubaha oo isaga iyo xerta siyaaro (xoolo sadaqo ah) la siiyo maaddaama aysan shaqo kale haysan. Saddex wadaaddo xoolo dhaqatada ka mid ah oo miyiga wax ka dega oo markii la allabaryo ama ay siyaaro jirto quraan iyo qasiidooyin akhriya oo xoolaha la isu keeno wax laga siiyo, isla markaas cidaha miyiga u qaabbilsan qardhaasaha (xirsiyada), cashrinta ama tahaliilinta xoolada iyo dadka, iyo yaasiiminta dadka dhimanaya.
Saddexda nooc ee wadaaddadu waxa ay ka sinnaayeen meherinta ama nikaaxidda dumarka oo ka la ahaa dumar ay dhallinyaro masaafaysteen iyo dumar niman waaweyn lagu daro. Masaafadu madhabka Shaafici faraciisa waa xeelad xalaal ah, waxaana sida badan sameeya nin aan haysan hanti uu yarad isaga bixiyo.
Waxaa la sheegaa wadaad xoolo-dhaqato ahi in uu reerkiisa uga tegey walanbaysi oo ah in dadka la dhex qaado oo reerkii uu wadaadku u tagaaba ay neef u qalaan, marmarna hanti la siiyo inta uu hawlo wadaadnimo reerka u qabto.
Sida la sheego muddo dheer buu shiikhu reerkiisa ka maqnaa, waxa uuna habeen saq dhexe ku soo beegmay ciddii oo la hurdo. Waxaa la weriyaa in uu shiikhu la ildarnaa waxa loo yaqaan “kacsi” maaddaama uu xilligii uu maqnaa cunayey hilib ari oo xad-dhaaf ah.
QORMO LA XIRIIRTA: Sawirka Jannada
Aqal soomaaliga ama qaymadda waxaa kaadka hurdey habartiisii iyo gabar uu dhalay oo la qabey oo reerka dhibaad u soo doonatay. “Dhibaad” waa xoolo ay dumarka la qabaa reerohooda ka soo doontaan markii sanaddo la joogaba.
Shiikhu mugdigii buu waxa uu kacsigii badnaa ka la dul dhacay gabadhiisii isaga oo habartii ku khalday. Gabadhii iyada oo uu guskii shiikhu ku jiro ayey garatay in ninka dhalfada ku xabaalay uu aabbeheed yahay, waxa ayna tiri “Aabbe waa hebla”, waxa uuna shiikhu yiri; “Aabbe kani ku galyey ee khayr ha ku la galo”. Riwaayad kale oo saxiix ah waxaa lagu weriyey lafdi kale oo ah ”Maandhey kani ku galyey ee khayr ha ku la galo”. ”Maandhe” waa erey loo adeegsado dadka waalidka loo yahay ama laga weyn yahay.
Sidaas ayuu shiikhu ugu galmooday gabadhii dhabarkiisa laga soo gooyey, waxaana sheekada laga weriyey dad lagu kalsoon yahay oo geeljire ah.
Marti soorkii Imaamka
Martigelinta dadka waa la ammaanay, waxaana la sii ammaanay sooryaynta muslimiinta siiba wadaaddo Eebbe markii ay xusuustaan argagaxa baqdin darteed in cunto la siiyaa waa khayr iyo barako.Cumar-Seeddi waxa uu dalka Jarmalka degganaa labaataneeye sano, waxa uuna booqasho ku tegey Gaalkacyo isaga oo ay weheliso Mona Torre oo ah haweeney jarmal ah oo uu dalkeeda ku guursadey muddo dhexdaas ah. Waxa...
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 5th March 2018
Siyaarada weliyadda Turba Bintu Wallac